असभ्यको परिचय नदिउँ | himalayakhabar.com
असभ्यको परिचय नदिउँ
हिमालयखबर | 28th Sep 2018, Friday | २०७५ आस्विन १२, शुक्रबार २१:५८
मातृभूमिको प्रधानमन्त्री आउँदा यति ठूलो विवाद संभवत अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुबीच कहिल्यै भएको थिएन । स्वागत र कालोझण्डा देखाउने नाममा यति ठूलो असहिष्णुता पनि कहिल्यै देखिएको थिएन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ७३ औं महासभा यतिखेर न्यूयोर्कमा चलिरहेको छ । सदस्य राष्ट्रका हैसियतमा हरेक वर्षमा महासभाहरुमा नेपालबाट सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुँदै आएका छन् । यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहितको टोली सहभागी छ ।
पहिलेदेखिकै चलन हो– प्रधानमन्त्री आउँदा नेपाली समुदायसँग अन्तरकृया गर्ने र आफ्ना कुराहरु राख्ने । यस्तो कार्यक्रम विशेषगरि न्यूयोर्कमा हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा युएनको नेपाल नियोग, कतिपय अवस्थामा कन्सुलेट अफिस त कतिपय अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री हुन् उनैका दलको भातृसंस्थाले यस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए ।
सन् १९९० मा नेपालमा बहुदलीय व्यबस्थाको पुनस्र्थापना पछि १३ जना प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । यसबीचमा हरेक वर्ष महासभामा न्यूयोर्क आउँदा प्रधानमन्त्रीहरुले नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने चलन हो । प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यसमा सरकारलाई सुझाव दिने, गुनासो गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने चलन पनि थियो ।
तर यसपटक महासभामा आएका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रमका विषयमा निकै ठूलो विवाद भएको छ । कार्यक्रम लगभग स्थगित भएको चर्चा चलेको छ । कारण रहेछ– यसमा समेत पक्ष र विपक्षका रुपमा नेपाली खडा भएका छन् ।
आएका प्रधानमन्त्री अतिथि हुन्, सुझाव छ भने लिखित रुपमा दिनुस्, भेटेर दिन मन छ भने ज्ञापन पत्र बुझाउने समय पनि उपलव्ध गराउनेछौ भनेर एकथरिले भन्दै रहेछन् । अर्काथरि भने प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्ने हलको ढोकामा बसेर कालोझण्डा देखाउन र नारा लगाउन पाउनुपर्छ भन्दै छन् ।
बडा दुःखको कुरा । नेपालबाट १३ हजार किलोमिटर पर आएर बस्दा पनि हामी नेपालीहरु नेपालको राजनीतिबाट बाहिर सोच्न सक्दैनौ । आपूm बसेको अमेरिकाको घर छिमेकमा के भैरहेको छ भन्ने बारेमा चासो दिदैनौ । आउँदो नोभेम्बरमा यहाँ हुन गैरहेको चुनाव, त्यो चुनावमा भोट हाल्नका लागि नाम दर्ता गराउन चासो छैन । अधिकांश भोट हाल्न पनि जाँदैनौ ।
आप्रवासीका हक अधिकारका विषयमा सुनुवाई हुनेगरि बोल्न लेख्न सक्दैनौ । तर नेपालबाट नेता आउँदा स्वागत र विरोधले हामी किन यसरी छिन्न भिन्न छौ ?
नेपालमा सरकारले जुन रुपमा जनताले आशा अपेक्षा गरेका थिए, त्यस अनुसार काम गरेर देखाउन नसकेको तथ्य सत्य हो । सरकार अलमलिएको छ । हात हालेर आक्रामक रुपमा जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा कमजोर सावित भएको छ भने हात नहाल्नुपर्ने ठाउँमा हात हालेर गिजोलेको छ ।
कानुन र न्याय भन्ने कुरा ठूलाबडाका निम्ति मात्र हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । सुशासन नभएकै हो । अनुशासनहिनता, दण्डहिनता व्याप्त छ । मन्त्रीहरु बेलगाम छन् ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् या अरु मातृभूमिबाट आउने जो कोही हुन् उनीहरु हाम्रा अतिथि हुन् । हाम्रो संस्कारले अतिथिलाई स्वागत गर्न सिकाएको छ ।
केही कुरा भएमा बसेर पाहुनासँग गुनासो पोख्न पनि कसैले रोक्न मिल्दैन ।
विरोध र समर्थनका नाममा नेपाली समुदाय यसरी भाँडिनु यो कसैको पनि हितमा पटक्कै छैन । कालोझण्डा देखाउँदैमा सरकारले छु मन्तर गरेर समस्या समाधान गरिहाल्ने पनि होइन । अनि नदेखाउँदैमा सरकारले असाध्यै जनप्रिय काम गर्दै अघि बढेको पनि छैन ।
अस्ति सांसद गगन थापा कुर्लिदै थिए । विरोध खतिवडा चिच्याउँदैथिए । आज माधब नेपाल गुनासो पोख्दैथिए । उनीहरुका कुरा त सरकारले ध्यान दिएको छैन भने न्यूयोर्कको एउटा कुनामा कालोझण्डा देखाउँदैमा समस्या समाधान सरकारले गरिहाल्ला भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिदैन । बरु त्यसले एउटा खराब संस्कारको विकास हुँदै जानेछ । ताकी जुनसुकै प्रधानमन्त्री आएपनि कालोझण्डा देखाउने । कारण चाहिदैन–अर्को दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकै कारण कालोझण्डा देखाउने संस्कार बढ्दै जानेछ ।
कोही पनि प्रधानमन्त्री या सरकार दूधले नुहाएका हुँदैनन् । कमजोरी नभएको कुनै सरकार हुँदैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदैनन् । सामान्य कारण देखाएर कालोझण्डा देखाउने रोग प्रवासको नेपाली समुदायमा भित्रिँदैछ । जसले हामीबीच एकता होइन, विखण्डन ल्याउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री हुनका लागि कुनै दलबाट निर्वाचित भएका होलान् । तर त्यो पदमा पुगिसकेपछि मुलुककै प्रधानमन्त्री हुन् । मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई विदेशको भूमिमा कालोझण्डा देखाउनु बौद्धिक काम हुँदै होइन । हिजो सुशील कोइराला जस्ता सादगी नेतालाई देखाउनु पनि गलत थियो, बाबुराम भट्टराईलाई देखाउनु पनि गलत हो र केपी ओलीलाई देखाउनु पनि गलत हो ।
हामीमध्य धेरैले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि गर्व गर्छौ । सामाजीक सञ्जालमा फोटो हाल्छौँ । अनि एनआरएनले दोहोरो नागरिकताका लागि केही गर्न सकेन भनेर गाली पनि गर्छौ ।
किनकी उताको सम्पत्तिको लोभ लाग्न छाडेको छैन । नागरिकता लिएको दाजुभाईले थाहा पाइहाल्लान् कि भनेर गुपचुप बस्ने पनि तपाई हामी मध्यकै धेरै छौँ ।
तर नेपालको प्रमं आउँदा खुशी बनाएर गैर आवासीय नेपालीका माग र चासोलाई पुरा गर्ने र गराउने तर्फ माग राख्नुपर्नेमा कालोझण्डा देखाएर कस्को स्वार्थ पुरा हुन्छ ? विरोध गरेर कार्यक्रमनै गर्न नदिएपछि कुन चाँही प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले हामी अमेरिकामा बस्ने नेपालीप्रति सहानुभूति राख्छ ?
सासुको राजदूत पद गुम्ला भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सरकार विरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् । यहाँ तरुण दल र नेविसंघका नाममा तमासा देखाएर के हुन्छ ? प्रेम र सद्भावले अपनत्व बढाउँछ, घृणाले वैमनस्यता र आक्रोश बढाउँछ । यहाँ विरोध गर्दै कालोझण्डा देखाउँदा केहीले नेपालबाट स्याबास पनि भन्लान् । तर त्यसले नेपालमा नत अहिलेको सरकारको एप्रुभल रेटिङनै घट्छ, नत नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियतानै माथि चढ्छ ।
सामाजीक सञ्जालमा हेरेमात्र पुग्छ–अमेरिकामा बस्नेहरु प्रति नेपालबाट आक्रोश, कुण्ठा व्यक्त गरेर कति गाली गरिएका हुन्छन् । असभ्य भनिएका हुन्छन् । कालोझण्डा, विरोध प्रदर्शनले नेपालबाट सम्मान र ताली त छाडौँ असभ्य, संस्कार नभएका भनेर गाली खानु शिवाय अरु कुनै उपलव्धी हुनेवाला पनि छैन ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कार्यक्रम विवादरहित बनाउन नसक्नु यहाँको कुटनीतिक निकायको सबैभन्दा कमजोरी देखिएको छ । न्यूयोर्कको युएन मिसन, कन्सुलेट कार्यालयको ठूलै कमजोरी हो । डिसीको दूतावासले पनि प्रमंको कार्यक्रमका लागि प्रयाप्त होमवर्क नगरेकै हो । यसको परिणाम संभवत प्रधानमन्त्रीको नेपाल फर्किएपछि देखिनेछ ।
विगतका वर्षमा प्रधानमन्त्रीको आगमनकै क्रममा नेपाल डे मनाउने परिपाटीलाई यसपटक पहिलेनै गरिएको विषयमा पनि अहिले न्यूयोर्कको समुदायले प्रश्न गरिरहेका छन् । कर्मचारीको असहयोगको पनि केहीले हिसाब किताब गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको दानापानी खाएर प्रधानमन्त्री संलग्न हुने भनिएका कार्यक्रम असफल बनाउन कर्मचारीवृत्तले असहयोग गरेको कुराले राम्रै चर्चा पनि पाएको छ ।
अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरु असभ्य छन् । अझ न्यूयोर्कमा बस्ने त महाअसभ्य छन् भनेर संसारभरिका नेपालीमाझ सन्देश पु¥याउने कि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम गर्न दिने ? मलाई थाहा छ यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिने छैनन् । अहिलेसम्म आयोजकले कार्यक्रम स्थगितनै गरेको भन्ने आधिकारिक सूचना त गरेका छैनन् । आधिकारिक सूचना गरेर कार्यक्रम स्थगित गर्नुप¥यो भने अमेरिकामा रहेका एनआरएन, प्रवासी मञ्च, जनसम्पर्क समिति लगायत न्यूयोर्कका संस्थाहरुले कुन मुख देखाउलान् ? प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम गर्ने वातावरण त मिलाउन नसक्नेले दोहोरो नागरिकता मिलाइदिनुप¥यो भन्दै कुन मुख लिएर नेपाल जाँदा सिंहदरबार छिर्ने आँट राख्लान् ?
बुद्धि, विवेक पु¥याउँ । तय भैसकेको कार्यक्रम स्थगित हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । अमेरिकामा बसेका नेपालीकै इज्जत जान्छ, न्यूयोर्कका नेपालीको बदनाम हुन्छ । अमेरिका जस्तो संसारले सभ्य भनेर हेर्ने देशमा बसेका हामीले अरुलाई सभ्यता सिकाउनुपर्नेमा उल्टो असभ्य भनेर नचिनिउँ ।
कार्यक्रम सभ्य रुपमा गर्नैपर्छ । विरोध असहमति छन् भने ज्ञापनपत्र दिएर, माग राखेर जाँदा त्यसले हार्दिकता बढाउँछ, आत्मियतानै थप्नेछ ।
२०७५ आस्विन १२, शुक्रबार १९:३४
२०६७ साल पौष महिनाको २९ गते बिहिबार (जनवरी १३ तारिख, २०११) मा रामेश्वरजीसँग फ्रेन्कफर्ट एयरपोर्टमा मेरो लामो कुराकानी भएको थियो। हामी दुबै, संयोगले नै भनौ, काठमाडौदेखि ...
होलीभिजन स्कुलका ४५ जना स्काउट दीक्षित
२०७५ आस्विन १३, शनिबार ००:२०